India vs Zimbabwe 1st, 2nd, 3rd ODI Live streaming IND vs ZIM 2016 broadcasting TV channels
india tour of zimbabwe 2016 watch online
Team India tour of Zimbabwe 2016 as per Fixtures starts from the 11 june and we are almost near to start this awesome encounter between the two teams. India and Zimbabwe team are played total 3 ODI and 3 T20 games in 2016 series. All Matches of India vs Zimbabwe will be played on the same venue at Harare Sports Club in Zimbabwe. The blue shirts will fly Zimbabwe to play a shorter series of 2 weeks.
Bharat Included most of the new faces for this Zimbabwe tour 2016 so this will surely boost a some confidence of the home side. Zimbabwe looking on this home series some good performance from their batsman and bowlers. Team India will be leading by the MS Dhoni while Zimbabwe team leading by the Graeme Cremer.
Team India who is visiting Zimbabwe after a gap of 1 year, Both team Bharat and Zimbabwe played their last ODI and T20 series in July 2015 and on that occasion team India won ODI series with 3-0 but Zimbabwe comeback well in the t20 games as they level T20 series with 1-1. Men in Blue recently won Asia Cup 2016 and also played in the semi final of T20 World cup 2016 while on the other side Zimbabwe team was failed to qualify for the main round of the T20 world cup 2016.
India vs Zimbabwe 2016 First One Day International
First One Day International Match of India tour of Zimbabwe 2016 between India vs Zimbabwe played at Harare Sports Club, Zimbabwe on 11th june 2016. This IND vs ZIM First ODI Match will be kick off from the 9-00 AM Local time, 12-30 PM IST time and 7-00 AM GMT time.
Zimbabwe vs India second ODI Match
Harare Sports Club Harare will be host second ODI Match 3 Match ODI series between India vs Zimbabwe. As per fixture This India vs Zimbabwe 2nd One day international match begin on 9-00 AM Local time, 12-30 PM IST time and 7-00 AM GMT time on 13 june 2016 Monday.
Zimbabwe vs India 2016 Third ODI Match
Third and Final ODI Match between this India tour of Zimbabwe will be played on the 15th june 2016 on the same venue at Harare Sports Club, Harare from the 9-00 AM Local time, 12-30 PM IST time and 7-00 AM GMT time on 13 june 2016 Monday.
India vs Zimbabwe 2016 First, second, Third ODI Live Telecast TV channel List
All the cricket fans can watch the India tour of Zimbabwe 1st, 2nd and 3rd ODI Match live telecast and streaming on television set and also online on internet via Computer, Laptop, tablet, PC and mobile device like iPhone, ipad and ios device. Indian Fans can watch the 1st, 2nd, 3rd ODI Match between India vs Zimbabwe live telecast on Starsports, Ten 3 TV channels while some of the local channel like DD sports, DD National (DD1) Doordarshan might broadcast the Bharat vs Zimbabwe 2016 broadcast online.
Zimbabwe Fans watch all First, Second and Third ODI Match of IND vs ZIM Live on Ten sports while Sky sports bring the live coverage of this India tour of Zimbabwe 2016 in UK country.
Apart of India and Zimbabwe Ten sports also broadcast this India vs Zimbabwe ODI series 2016 live action in Australia, Pakistan and UAE country too. Willow TV provide the India vs Zimbabwe live in USA.
India vs Zimbabwe 1st, 2nd, 3rd Live streaming 2016
All the fans can watch the live streaming of this 3 Match ODI series of Ind vs ZIM 2016 on starsports.com and tensports.com official site . Fans can also watch India vs Zimbabwe best moments and highlights of first, Second and third ODI Match on YouTube and daily motion video channel.
1 India vs Zimbabwe 2016 First One Day International
2 Zimbabwe vs India second ODI Match
3 Zimbabwe vs India 2016 Third ODI Match
3.1 India vs Zimbabwe 2016 First, second, Third ODI Live Telecast TV channel List
4 India vs Zimbabwe 1st, 2nd, 3rd Live streaming 2016
← England vs Pakistan Test ODI T20 live streaming, Pakistan tour of England 2016 schedule → Maharoof included in Sri Lanka Squad for ODI series against England and Ireland after a 4 Year period